Hoomaan awaannisaa biyyoota ollaa Yemeniifi Somaaliilandirraa Itiyoophiyaa gale - BBC News Afaan Oromoo
Hoomaan awaannisaa biyyoota ollaa Yemeniifi Somaaliilandirraa Itiyoophiyaa gale
23 Hagayya 2019
Hoomaan awwaannisaa biyyota ollaa akka Yamaniifi Somaaliilandirraa Itiyoophiyaa galuu Ministeerri Qonnaa himeera.
Waktiin kun Itiyoophiyaa keessatti wayita omisha hedduun lafa irra irra jiru yoo tahu biqiloota soorachuun kan jiraatu awaannisni Itiyoophiyaa galuun isaa yaaddoo guddaa qonnaan bultoota irratti uumera.
Ministeera Qonnaatti Daariktera Kunuunsa Biqiltuu kan tahan Obbo Zabdiyoos Soollaattoo hoomaan awwaannisaa biyyoota ollaa irraa gara Itiyoophiyaa gale naannolee shan keessatti mul'ateera jedhan.
Isaanis naannolee gara Bahaatiiniifi Kibba Bahaa yoo tahan Oromiyaa, Affaar, naannoo Ummattoota, Sabaafi Sab-lammoota Kibbaafi naannoo Amaaraa akka tahe himan Obbo Zabdiyoos Solaattoo
Hoomaan awaanisni Itiyoophiyaa gale kan guddina isaa fixatedha kan jedhan daarikterichi biqiltoota irras tahe oomisha kaan irra miidhaa guddaa geessisuu hin danda'u jedhan.
Raammoon geerii biyyoota Afriikaa hedduu weerare
Akeekkachiisa weerara ilbisootaa saatalayitarraa argame
Sababni isaas awaannisni guddina isaa fixate [mature] lubbuudhumaan turuuf yoo waan xixiqqaa nyaate malee guyyaa guutuu nyaataa hin oolu jedhan.''Awwaannisni guddina isaa hin fixatne sekondii tokkoof iyyuu nyaata addaan hin kutu'' jedhan Obbo Zabdiyoos.
Hoomaan awaannisaa Itiyoophiyaa gales isa guddina isaa fixate haa tahu malee qilleensa mijataa barbaaddatee hanqaaquuf ykn wal horuuf akka tahe dubbataniiru.
Awwaannisni jiidha tahee haala qilleensaa ho'aa yoo argate guyyoota kudhan keessatti hanqaaquu danda'a jedhan.
Yoo qilleensi mijachuufii dide garuu hanga guyyaa 17 fi isaa oliitti turuu danda'a jedhanii erga hanqaaqee ykn killee buusees hoomaan awwaannisaa dhalattu koochoo baastee balali'uu jalqabuuf hanga guyyota 50 itti fudhachuu akka danda'u himaniiru.
Kanaafiyyuu bakkuma dhalatanii jiranitti tooftaa garaagaraan ajjeesuun akka danda'amu himan.Hoomaan awwaannisaa baay'een Itiyoophiyaa galee osoo hin qubatiin deebi'es akka jiru dhageenyerra.Hanga ammaatti qonnaan bulaa fi ogeessota waliin hordoffii cimaa gochaa jirra kan jedhan Obbo Zabdiyoos yoo dursinee ittisuu irratti hin hojjenne Itiyoophiyaaf yaaddoo guddaa tahuu danda'a jedhan.
Hoomaan awaannisaa biyya keessa bakka garaagaraa qubates tarii osoo hin argamiin ture hanqaaqee yoo baay'ate biyya keessa bakka garaagaraatti babbal'achuu danda'a jedhan.Maaliif gara Itiyoophiyaa gale.
Obbo Zabdiyoos awwaannisni bakka hin taa'u jedhanii garuu gara biyya keenyaatti akka galuuf sababa kan tahe kallattii bubbeeeti jedhan.
Dabalataan haala qilleensaa wal hormaata isaaf mijataa tahes barbaada kan jedhan daarikteerichi naannoleen Itiyoophiyaa hedduun akka wal horuuf mijataa tahuu danda'u jedhan.
Hanga ammaatti hoomaan awwaannisaa Itiyoophiyaa gale miidhaa oomisha irras tahe biqiltoota irra geessise qabaachuu baatus itti fufinsaan biyya keessa galuu akka danda'u raagotni garaagaraa qorannoodhaan nuuf kennamaniiru jedhan.
Hoomaan awaannisaa dhalatee ahnga guddina isaa xumuratutti nyaata waan addaan hin kutneef oomisha bal'aa irratti miidhaa guddaa geesisuu danda'a.Mootummaan Itiyoophiyaas keemikaalaanis tahe maloota aadaan yeroodhaan ittisuuf akka hojjechaa jirus himaniiru.Naannoo Oromiyaa keessaa Godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa qubatee ture kan jedhan ammoo Obbo Mangistee Olii ogeessa kunuunsa biqiltuu Biiroo Qonna Oromiyaati.
Hoomaan awaannisaa aanaa Doobbaa qubate qonnaan bultootni bakkuma inni buufatetti ajjeesanii balleessan jedhanii baay'inni isaas kumaatama keessa kan tahudha jedhan.
Ammas aanolee Godinaalee Harargee, Arsii, fi gara kibba Oromiyaatiinis kannen karaa daangaa saaxilamoo tahan irratti ciminaan sakatta'insa gaggeessaa jirra jedhan.
Image copyright The Sydney Morning Herald
Dhaabbilee ittisa awwaannisaa irratti hojjetan kannen akka FAO, DLC [desert Locust Control] kan Baha Afrikaatti hojjetu waliin taanee hojjenna jedhe Mangisteen.
Hanga ammaatti omisha naannoo Oromiyaa irrattis miidhaa dhaqqabsiise hin qabu jedhan.
Hoomaan awwaannisaa darbee darbee kanaan duras kan mul'atu yoo tahu akka wal hin horreef ittisamaa waan tureef miidhaa guddaa hin geesisne jedhan ogeessonni kunneen.
Har'a naannoo Affaar bakka hoomaan awwaannisaa buufateera jedhamee sodaatamee fi adda bahetti biifaan keemikaalaa akka gaggeeffamu Obbo Zabdiyoos himanii, mallattoo hoomaa awwaannisaa arginaan qonnaan bulaan ariitiidhaan ogeessota qonnaa naannoo isaanii jiranitti himuu qabu jedhan.
Kannisa guddicha addunyaa kanaa: Kun kanniisa moo awwaanisa?
Gidaamiitti namoonni lama ajjeefaman, kaan yaaddoo guddaa himatu
Gaaffiin naannoo ta'uu Uummata Kafaa irraa MM Abiy Ahmadiif dhiyaate
Hordoftoonni amantii Ortodoksii naannoo Amaaraatti hiriira ba'an